Kambodza : Halalaka, Tsy Hitongilana, Hivelatra Ny Fifidianana Hoy Ny Governemanta – Fa Zavatra Hafa No Lazain’ny Fiarahamonim-Pirenena · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Jolay 2018 5:19 GMT
Vakio amin'ny teny Swahili, Español, Français, Italiano, English
Dikasarin'ny lahatsary tamin'ny YouTube
Liberaly, mivelatra, demokratika, am-pilaminana, malalaka, tsy mitongilana ary tsy misy herisetra.
Ireo no teny ampiasain'ny birao Kambodziana misahana ny asa fanaovana gazety miankina amin'ny fanjakàna mba hamaritana ny fomba hitantànan'ny governemanta ny fifidianana solombavam-bahoaka kasaina hatao amin'ny 29 Jolay 2018. Manomboka amina'ny 7 Jolay ny fampielezankevitra.
Lahatsary iray novokarin'ny Sampana momba ny gazety sy ny Tamberina Mailaky ao amin'ny biraon'ny filànkevitry ny Minisitra mihitsy no nieboebo hoe ” heverina ho iray amin'ny fifidianana tsara indrindra eo amin'ny tantaran'ny Kambodza ” ity fifidianana ho avy ity.
Ny famaliana ireo tsikeran'ny vondron'ireo fiarahamonim-pirenena ao an-toerana sy manerantany momba ny faharavan'ny demokrasia Kambodziana no mety ho tanjon'ilay lahatsary. Ny Antokon'ny Vahoaka kambodziana no teo amin'ny fitondrana nandritra ny 33 taona teo ambany fitantànan'ny Praiministra Hun Sen, izay heverina ho filoham-panjakana nanompo naharitra indrindra tany Azia Atsimo Atsinanana.
Asehon'ilay lahatsary fa misokatra amin'ny mpilatsaka ho fidiana rehetra ny fifidianana, fa tsy araka izay voalaza amin'ny fanakianana any amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Hita ao hatramin'ny kabarin'i Hun Sen mibaiko ireo mpiasam-panjakana hanampy ireo antoko politika rehetra voarakitra mandritra ny fotoanan'ny fampielezankevitra.
Ny Praiministra Hun Sen mikabary. Dikasary tamin'ny lahatsary Youtube
Fa ny teny fototra eto dia ny hoe ” voarakitra”. Marina, fa afaka mandray anjara malalaka amin'ny fifidianana ireo antoko voarakitra rehetra.
Saingy ny antoko mpanohitra voalohany teto amin'ny firenena, ny Cambodia National Rescue Party (CNRP), dia noravan'ny Fitsarana Avo tamin'ny Novambra 2017, taorian'ny niampangan'i Hun Sen azy ho niray tendro tamin'ireo firenena vahiny handrodana ny governemantany.
Nandositra ny firenena na migadra amin'izao fotoana izao ireo mpitarika ambony tao amin'ny CNRP, ary izay mpikambana tao amin'ny parlemanta dia nalàna tamin'ny toerany ary tsy mahazo milatsaka ho fidiana mandritra ny dimy taona.
Hamafisin'ilay lahatsary aza fa manome lesona momba ny fampiroboroboana ny fandalàna ny fahamaroana ho an'ireo firenena hafa i Kambodza, tamin'ny nanasongadinany fa valo fotsiny no isan'ireo antoko nandray anjara tamin'ny fifidianana solombavambahoaka tamin'ny 2013. 20 no isan'ny antoko politika voarakitry ny governemanta amin'izao fotoana izao.
Kambodza ho modely amin'ny fivelarana ? Lahatsary avy amin'ny Youtube
Asongadin'ilay lahatsary ihany koa ny fisian'ireo mpanaramaso iraisam-pirenena izay mety hitsidika tsy misy teritery ireo biraom-pifidianana. Nolazain'ny governemanta fa mpanaramaso 50.000 no nasaina ary mpanao gazety 300 avy amin'ny vondrona 35 no nekena hanatrika ny fifidianana amin'ity taona ity.
Hamafisin'ilay lahatsary fa tsy tahaka ny any amin'ireo firenena hafa, fa tsy mametraka fepetra amin'ireo mpanaramaso ny fifidianana iraisam-pirenena i Kambodza. Dikasary avy amin'ny lahatsary YouTube
Fa tsy nolazain'ilay lahatsary hoe tamin'ny May 2018 dia namoaka fitsipi-pitondràntena ho an'ireo mpanaramaso ny fifidianana ny governemanta, fitsipika izay nolazain'ireo vondron'ny haino aman-jery fa mety manohintohina ny asan'ny mpanao gazety. Raràn'ilay fitsipika ny mpanao gazety tsy hilaza ny ” heviny manokana na manaratsy” na manao tafatafa tsy nahazoana alàlana any amin'ny biraom-pifidianana.
Melohin'ilay fitsipika ihany koa ny fanapariahana vaovao izay mety hiteraka ” korontana na fahaverezam-pitokisana” amin'ny fifidianana.
Ho setrin'ilay fitsipika, dia nilaza ny Federasiona iraisam-pirenen'ny Mpanao gazety fa ” Manakana ny fahazoan'ireo kambodziana ny mety ho vaovao rehetra ilaina handraisana fanapahankevitra mazava ara-politika ireo torolàlana farany ireo.”
Amin'ny lafiny iray amin'ilay lahatsary, dia aseho ho toy ny hetsika milamina ” tsy misy adihevitra kabary tsara lahatra” ilay fifidianana.
Dikasary avy amin'ny lahatsary YouTube
Tsy ambaran'ilay lahatsary ny prakas (fehezandalàna) iraisan'ny ministera navoaka tamin'ny 28 May 2018, izay nanitatra ny fifehezana ny haino aman-jery sosialy sy ny tranonkala ao amin'ny firenena. Mandidy ireo sampan-draharaha maro amin'ny governemanta hanakana ireo tranonkala misy votoaty heverina ho ” fandrisihana, famotehana ny firaisankina, fanavakavahana sy famoronana fanakorontanana manohintohina ny filaminam-pirenena, ny tombotsoam-bahoaka ary ny filaminam-bahoaka” ilay torolàlana vaovao.
Vondronà fiarahamonim-pirenena maherin'ny 116 any Kambodza no nanao sonia fanambaràna manakiana ilay prakas, tamin'ny filazàna fa izany dia ” mandrahona ny zon'ny fiainan'ny tena manokana sy ny fahalalahan'ny fanehoankevitr'ireo mpisera mandeha irery amin'ny aterineto sy ny haino aman-jery sosialy any Kambodza no sady mampihena ny erana efa voafetra sisa navela hiadian'ny olona hevitra taorian'ireo volana maro niadiana tamin'ny fahalalahan'ny haino aman-jery ” . Toy izao no vakin'ilay fanambaràna :
Angamba natao hanempotra ireo karazana adihevitra ataon'ny olona rehetra aty Kambodza ilay didy. Saika ny fomba fijery rehetra izay heverin'ny manampahefana ho tsy azo ekena no mety ho tafalatsaka ao amin'ireny fepetra manjavozavo sy malalaka ireny, toy ny ” famotehana ny firaisankina” na “fanohintohinana ny filaminambahoaka”.
Ankoatry ny fanenjehana ny mpanohitra, dia voaheloka ho nanozongozona ny fahalalahan'ny fanehoankevitra ihany koa ny governemanta Hun Sen taorian'ny nanomezany baiko ny hiampangàna ny foiben'ny onjampeo ao an-toerana sy ireo gazety izay tena mpanakiana ny antoko eo amin'ny fitondràna noho ny tsy fandoavan'ireo hetra .
Ireo fanenjehana ireo no nahatonga ny fanjavonan'ireo gazety roa hany tsy miankina teto amin'ny firenena – ny The Phnom Pehn Post sy ny The Cambodia Daily. Taorian'ny nandraisany ny taratasin-ketra midangana, dia nitsahatra tamin'ny asany ny Daily tamin'ny Septambra 2017, ny gazety kosa dia namidin'ny tompon'ny Post tamin'ny fikambanana misahana ny fifandraisana miasa ho an'ny governemanta.
Mahavariana, fa asehon'ilay lahatsary ihany koa fa ” tsy singa fototra amin'ny famaritana ny fizotry ny demokrasia ny isan'ny mpifidy.” Tanisainy mihitsy aza ny fahambanian'ny taham-pahavitrihana any amin'ny firenena toa an'i Etazonia sy Frantsa. Angamba ireny singa ireny natsofoka hiseho masoandro noho ny zavamisy hoe mandrisika ny mpomba azy sy ny vahoaka ny CNRP mba hanao fahirano ny fifidianana.
Tamin'ny fandraisam-pitenenana teo anatrehan'ny Firenena Mikambana tamin'ny faran'ny volana Jona 2018, dia nofintinin'ny Vaomiera Iraisam-pirenenan'ny Mpitsara ny fanakianan'ireo vondrona mpiaro ny zon'olombelona momba ny fitontongan'ny demokrasia any Kambodza :
Mbola araraotin’ ireo manampahefana ny rafi-pitsaràna mba hamaizana ny fiarahamonim-pirenena, ny haino aman-jery tsy miankina, ny mpanohitra ara-politika ary hatrany hatrany, ireo olon-tsotra
Rahonan'ny governemanta ho henjehina ny olona rehetra izay miantso ho amin'ny fanaovana ankivy ilay fifidianana izay efa tena nanahirana sy naha-afa-baràka. Nanangana vondron'asa izay hanara-maso sy hifehy ireo torohay rehetra amin'ny haba-tranonkala sy ny haino aman-jery sosialy izy. Samborina ireo olon-tsotra, melohina ary tazonina araka ny lalàna vaovao momba ny ‘faniratsiràna mpanjaka’.
Ito ambany ito ny lahatsary manontolon'ny Sampana momba ny gazety sy ny Tamberina Mailaky ao amin'ny biraon'ny filànkevitry ny Minisitra :
06 Septambra 2021Azia Atsinanana
03 Septambra 2021Azia Atsinanana